आजको विनिमयदर : कुन देशको कति छ ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २० भाद्र शुक्रबार १४:०५
आजको विनिमयदर : कुन देशको कति छ ?
एजेन्सी, काठमाडौं। आज अन्तिम दिन अर्थात शुक्रबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ।
PREVIOUS Previous post: प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता, छैन कुनै प्रतिक्रिया
NEXT Next post: ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ?